Olee otú ndabere iTunes Playlist.
Ka ụfọdụ ndị na-eme a ndabere nke iTunes ndabere nwere ike ghara ịbụ ihe kasị mkpa na ụwa, ma ọ bụ otu n'ime ole na ole ihe ndị dị mkpa maka a ọtụtụ mmadụ ndị nke ga-achọ na-a nkwado ndabere nke ihe niile na ha na ha PC. Music bụ akụkụ dị mkpa nke smartphones ụbọchị ndị a na ọ na-ewe a otutu oge na ego (mgbe ụfọdụ) maka mwube a playlist na ọ dịghị onye ọzọ na otu enyi ndepụta ga-ma ọ bụ a nwanne ga-eso. Ya mere, na-eburu gị playlist nchebe na n'ọtụtụ ebe na-enye gị ohere ka mma ka ha ghara ịbụ a aja ma ọ bụ ihe ọ bụla software ma ọ bụ ngwaike ọdịda.
Olee otú mbupụ niile listi ọkpụkpọ site na iTunes 12?
A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-adịghị na ihu ọma nke na-eji iTunes n'ihi na nke nsogbu na ha ga-eche ihu ka a N'ihi nke nchebe na Apple mmasị ịnọgide na-enwe. Ọ ga-ebu n'obi na n'agbanyeghị otú mgbagwoju iTunes ọkọkpọhi, ọ bụ ihe kasị mma software na-ejizi ihe iOS na ngwaọrụ ma n'ịhụ na niile data bụ na otu ebe.
Na-esonụ bụ nzọụkwụ dị mkpa ka a ga-agbaso iji mbupụ niile listi ọkpụkpọ site na iTunes 12:
Nzọụkwụ 1: Wụnye iTunes
N'ihi na onye nwere mgbe ekesịpde ihe iOS ngwaọrụ, ha ga-ama iTunes arụnyere, ma ndị na-adịghị software arụnyere, ị nanị nwere gaba n'elu ka ukara website nke Apple na ibudata a free oyiri nke iTunes.
Nzọụkwụ 2: Ịchọta Library
Ozugbo ị na-emeghe iTunes 12, i kwesịrị emeghe faịlụ dobe ala na hover gị òké cursor n'elu "ọbá akwụkwọ" nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: exporting Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Họrọ "Export Playlist" nhọrọ si dobe ala na-egosi mgbe hovering n'elu "Library" nhọrọ.
Nzọụkwụ 4: Ịhọrọ Export File ụdị
Họrọ ụdị nke faịlụ, kwesịrị họrọ XML format ga na-a ndepụta nke dum playlist n'ihi na ị na na ọnọdụ na ị na-ahọrọ. Ozugbo i na-ahọrọ ụdị, pịa na "Save" button ịzọpụta ndabere na iji draịvụ ike gị.
Olee otú ndabere iTunes listi ọkpụkpọ na music faịlụ?
Na-emekarị ndị na-achọta ya ike naghachi ha iTunes listi ọkpụkpọ azụ n'ime music faịlụ na ha na-eme. Ụzọ kasị mma nke akwado gị iTunes playlist iji naghachi ha azụ n'ime music faịlụ bụ iji Nchikota ma ọ bụ ma ndị iTunes na Wondershare TunesGo.
Ozugbo i mere a ndabere na XML format, nzọụkwụ na usoro e kwuru n'elu, mgbe ahụ, i kwesịrị iji na-eso ndị na nzọụkwụ iji agbake music faịlụ site na listi ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 1: Open WonderShare TunesGo
Họrọ "naputa site na ndabere" nhọrọ na Wondershare TunesGo ma họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ị ka na iji iTunes. Ozugbo i họrọ nri faịlụ, pịa "Malite iṅomi" button.
Nzọụkwụ 2: ịgụ isiokwu Usoro
The faịlụ na e kwadoo iji iTunes 12 ga-apụta nri n'ihu gị, họrọ songs na ị chọrọ iji naghachi ma họrọ "Naghachi".
Nzọụkwụ 3: Họrọ Destination
Họrọ nhọrọ na mgbe ahụ ebe ebe ị chọrọ iji naghachi music faịlụ na ị ga-ọma na-aga.
> Resource> iTunes> Olee otú ndabere iTunes Playlist